Olee otú ọkụ mp4 ka Windows Movie Onye kere
Ọtụtụ n'ime anyị nwere okosobode nsogbu mgbe ọkụ mp4 faịlụ n'ime DVD site na iji Windows Movie onye tumadi n'ihi na mp4 format na-anaghị akwado na software. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ isi na-ọkụ gị imovie n'ime idvd mgbe ahụ ị rutere na nri page. Anyị ga-enye gị a site na, kwụpụ-site-nzọụkwụ usoro nke otú iji tọghata gị mp4 ka windows nkiri onye (Nhọrọ imovie ka idvd). Nke a ndu ga-enyere gị na-ere ọkụ usoro eji Wondershare DVD Okike. Nke a na usoro ga-enyere gị ọkụ DVD si dị iche iche formats dị ka MP4 MOV AVI na ndị ọzọ. Ọzọkwa a software nwekwara na-enye gị free DVD menu ndebiri nke mere na ị nwere ike họrọ onye na kasị mma suut gị DVD isiokwu. Dị nnọọ eso n'okpuru kwuru iji ọkụ gị MP4 ka Windows Movie kere ya.
1. Wụnye usoro ihe omume
Download na wụnye Wondershare version nke DVD Onye Okike na kọmputa gị iji na-amalite na-ere ọkụ gị mp4 ka DVD.
2. Import faịlụ na videos
Pịa "ibubata" ịgbakwunye faịlụ (audios na vidiyo) jidesie usoro ihe omume na kọmputa gị. Ma ọ bụ ị pụrụ nanị ịdọrọ na dobe faịlụ kpọmkwem n'ime usoro ihe omume.
3. Dezie video / foto
Pịa na pensụl na akara ngosi na mgbe ahụ nri pịa iji nweta edezi nhọrọ dị ka mkpụbelata, akuku, bugharia na resize. I nwekwara ike dezie ihie na saturation ntọala gị clip. Ọzọkwa ị nwekwara ike ịgbakwunye ndepụta okwu na watermark gị DVD ka n'ihu welie ya. All otú ahụ na atụmatụ nwere ike inweta site na nri ịpị pensụl na akara ngosi. I nwekwara ike dezie foto gị site n'itinye dị iche iche mgbanwe mmetụta.
4. Tinye music faịlụ
Pịa na music taabụ ma họrọ music faịlụ na-egwuri na ndabere nke foto gị ma ọ bụ vidiyo. I nwekwara ike ewepụtụ music dị ka gị mkpa na mmasị.
5. More DVD ndebiri
Ị nwere ike ibudata ọzọ DVD ndebiri ma ọ bụrụ na ama wuru na-ndị na-adịghị suiting gị mkpa. Dị pịa na 'menu' taabụ wee pịa on 'download ọzọ ndebiri' nhọrọ. Ị nwere ike nwere ohere ọtụtụ narị dị iche iche gburugburu sitere na site ọdịdị, ezumike na ezinụlọ.
6. Hazie thumbnails
Ị nwekwara ike dezie thumbnails gị video site na ịpị thumbnail na mgbe ahụ nri-na ịpị ya iji nweta n'ihu nhọrọ. Ị nwere ike iji etiti nke video dị ka thumbnail ma ọ bụ i nwere ike iji ihe ọ bụla ọzọ image gị oke site na-ahọpụta '-eji ndị ọzọ image' igbe.
7. Preview gị DVD tupu na-ere ọkụ
Pịa na 'preview' taabụ na-ele gị e kere eke. Ọ bụrụ na ị na-agaghị afọ ojuju na ya i nwere ike na-aga azụ na otú ụfọdụ ihe ndị ọzọ edits na aka gbasie.
8. Atọrọ ntọala nke DVD
Jide n'aka na ị na-azọpụta gị DVD dị ka a softcopy na ISO usoro. Pịa na ntọala wee pịa on 'ịzọpụta dị ka ISO'. N'ihi ya iche si a na-ahụ akwụkwọ ị ga ugbu a nwekwara a softcopy gị DVD na kọmputa gị.
Mgbe ị gụsịrị edezi nke anyị DVD click na 'Ọkụ' nhọrọ nyere na nri ala akuku. Ugbu a-na na na zuru ike mgbe gị video a na-nsure si mp4 ka window nkiri onye. (alternately imovie ka idvd).
Ewebata ndị Windows Movie Onye kere ọzọ: Wondershare DVD Creator (n'ihi na Windows & Mac)
Nero bụ maa ezigbo software, ma ọ bụ nke adịghị eji na-ọ bụrụ na ị na-adịghị Windows. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọzọ ahụ bụ dabere na ọkọkpọhi ọrụ mere, ị nwere ike na-atụgharị nke Wondershare DVD Okike. The software ike ọ bụghị naanị ọkụ MP4 ka DVD, kamakwa tọghata gị ọdịyo faịlụ na foto DVD. Ọzọkwa, ị nwere ike ịmepụta slide na-egosi na gị na foto ma tinye n'okirikiri na ya. The ọrụ enyi na enyi interface nke software-eme ka ọ a ikuku na-arụ ọrụ na.
Nke a software akwado a dịgasị iche iche nke softwares. The video formats agụnye MP4, AVI, MOV, MPEG, DAT na ọtụtụ ndị ọzọ. I nwekwara ike tọghata HD Videos gụnyere MTS, HD MKV, HD WMV na na. Foto formats akwado na-agụnye JPEG, PNG, GIF na TIFF, n'etiti ndị ọzọ.
Emepụta a ọkachamara DVD na 40 + professionally e menu ndebiri.
Personalizes videos na menu ndebiri tupu na-ere ọkụ Disc.
Enyere gị ịkọrọ ndị kere DVD na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ.
Akwado os: Windows 2003 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9
Top 10 free DVD menu Onye Okike
> Resource> Atụmatụ> Olee otú iji ọkụ mp4 ka windows nkiri onye